Global Voices teny Malagasy » Atrehan’i Gambia ny nofiratsin’ny fanaovana hazalambo mpamosavy nandritra ny fitondrana teo aloha · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 03 Desambra 2019 14:53 GMT 1	 · Mpanoratra Abdoulaye Bah Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Afrika Mainty, Gambia, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara, Vonjy Voina, Zon'ny Nanova na Mpitia Mitovy Fananahana (LGBT), Zon'olombelona
EFa naherin'ny 80 taona i Masirending Bojang fony izy voasambotra tao amin'ny vohitr'i Jambur nonenany, atsimo-andrefan'i Banjul, toerana izay nanombohan'ny ny fihainoana voalohany tany amin'ny faritra nataon'ny Kaomisiônan'ny Fahamarinana, Fampihavanana ary Fanonerana, folo taona mahery taty aoriana. Sary avy amin'ny justiceinfo.net naverina navoaka teo ambanin'ny CC BY 2.0.
Ny Alatsinainy 11 Novambra, natomboky ny Kaomisiônan'ny Fahamarinana, Fampihavanana ary Fanonerana ao Gambia ny iray volana hifantohana amin'ny fitohizan'ny hazalambo, tetikady nampiasaina fony fitondràn'i Yahya Jammeh. Tamin'ny 2009, nanaovan'ny fitondran'i Jammeh bemidina tany amin'ireo vohitra sy andrimpanjakana, ka isan'ireny ny tafika, ny sampam-pitsikilovana ary ny fonja.
Marobe ireo nino fa ilay hazalambo dia tetika nampiasaina mba handemena ireo mpanohitra an'i Jammeh sy hananganana kolontsain'ny tahotra sy horohoro.
Raha nampiasa ny herin'ny polisy ny fitondran'i Jammeh mba hamoretana sy hamonoana ny olompirenena, ireo mpikambana tao anatin'ny tafika koa dia niaritra hirifiry vokatr'ireny hazalambo ireny. Hoy ny bilaogy kerr-fatou.com mitatitra :
Iray tamin'ireo andrimpanjakana niaritra ny mafy tamin'ny hazalambo nataon'ny fitondran'i Jammeh ny polisy gambiàna. Talohan'ny asan'ny Kaomisônan'ny Fahamarinana tamin'iny Alatsinainy iny, manamboninahitra roa tao amin'ny polisy, Ken Mendy sy Abdou Colley, no nanome antsipîrihany tamin'ny fomba nahatongavan'ireo nantsoina hoe dokotera mpanao hazalambo nanao bemidina tao amin'ny foiben'ny polisy ary ka manamboninahitra enina raha kely indrindra nampangainy ho ‘mpamosavy’.
Nametraka ny fitànana an-tsoratra  avy any Etazonia tamin'ny alàlan'ny Skype teo anoloan'ny TRRC i Mustapha Ceesay , mpikambana fahiny tao amin'ny fitantanana ny Gambia Police Force (GPF) ary voalaza fa iray tamin'ireo niharan'ny fanaovana hazalambo tamin'ny 2009 nataon'ny filohan'i Gambia teo aloha, Yahya Jammeh, araka ny lazain'ny bilaogy kerr-fatou.com:
Nanomboka ny fihazàna. Ny 13 sy 14 Janoary 2009, araka ny lazain'ny Ceesay. Nandritra ireo andro roa ireo, nanao asa teo anivon'ny foiben'ny polisy ilay dokotera mpanao hazalambo, niampanga ny olona ho ‘mpamosavy’.
Ny 14 Janoary, olona 40 no nampangainy ho mpamosavy tao anivon'ny polisy. Nasaina nitokana niaraka ireny olona ireny, tanaty vondrona kely iray niandry ny hitondrana an-dry zareo amin'ny fiara hankany amina toerana tsy fantatra, mba ‘hotsaboina’
Nosoratan'ilay  mpanao gazety, Adama Makasuba, ny fomba nataon'ireny dokoteram-pamosavy ireny, “nanerena ireo mpitondra ambony tao amin'ny polisy tao amin'ny foibe tao Banjul mba hiventy ny tsy fivadiham-pitokisany tamin'ilay filoha teo aloha Yahya Jammeh, tamin'ny alàlan'ny fijoroana teo ambonin'ny lavaka iray fanaovana sorona akoholahy, teo ambany hazon-drofia,” niaraka tamin'ny fijoroana vavolombelona nivantana nataon'i Ken Mendy, ilay polisy nanao vavolombelona niaraka tamin'ny TRCC ny Alatsinainy 12 Novambra.
Tao anaty fampitam-baovao iray  nitondra ny datin'ny Martsa 2009, naboraky ny Amnesty International fa naka olona nanakaiky ny isa 1.000 ‘nalaina an-kery avy any amin'ny vohitra nonenany’ ireo ‘dokoteram-pamosavy’, nentina notazonina tany aminà toerana miafina ary noterena hisotro taharon-javatra mampirediredy.”
Lazain'ireo tatitra fa nisy polisy, miaramila ary olona avy amin'ny mpiambina ny filoha nanaraka an'ireny ‘dokoteram-pamosavy’ ireny rehefa manao ny ataony ry zareo…
Tany amin'ireo foibe fitazonana miafina, izay tafakatra hatramin'ny andro dimy ny nitazonana ny sasany, noterena hisotro zavatra tsy fantatra ry zareo, izay niteraka fahitàna sy fitondrantena mivika tamin'izy ireo. Avy eo, marobe ireo noterena hibaboka fa hoe mpamosavy. Tamin'ny tranga sasantsasany, nodarohana mafy ry zareo, nila ho faty mihitsy.
Fito taona taty aoriana, ny 2016, notaterin'ny  gainako.com fa lasa nanaram-po nitety ny isam-baravarana ireo mpihaza mpamosavy tao am-bohitr'i Kamfenda, faritra andrefan'i Foni, tanàna iray nanjakan'i Jammeh fahiny, ka tanjony tamin'izany ny hisambotra ireo olompirenena lazainy fa mpamosavy:
Tsaroan'ireo olompirenena ilay toby iray nosokafana tao amin'ny tanàna nahaterahan'i Jammeh ao Kanilai [atsimon'i Gambia] tamin'ny 2009, toerana nakàna an-kery olona an'arivony maro sy nanerena azy ireo hisotro ‘kubehjara’ [zavapisotro namboarina avy taminà bozaka faran'izay manapoizina, vita tao an-toerana ihany], fihetsika nataon'ireo dokoteram-pamosavy avy any Mali sy Ginea [nentin'i Jammeh niditra tany]. Nolazain'izy ireo fa vehivavy marobe no naolan'ireo dokoteram-pamosavy ireo, nangalarin-dry zareo ny zavatra teny aminy manokana toy ny vola sy telefaona finday ary noteren-dry zareo hanao dihy taminà fombafomba teny an-kalamanjàna avy eo. Marobe ireo vohitra niharan'izany, tonga tamin'ny hadalàna faratampony tao amin'ny vohitr'i Jambur, Makumbayaa, Barra, Sintet, Bwiam, ary maro hafa. Betsaka ny aina nafoy, ireo hafa indray miatrika aretin-tratra henjana hatramin'izao andro izao ary marobe hafa no nandositra an'i Gambia nankany Casamance (Senegaly) mifanila vodirindrina, mba handositra ireny fakàna an-kery ireny. Ilaina marihana fa maro tamin'ireo nanohitra no nosamborina sy notsaraina momba ny raharaha Jambur, ary nisy aza iray tamin'ireo mpilatsaka hofidiana ho filohampirenena, Halifa Sallah.
Ilay mpakasary sady mpanoratra efa nahazo loka, monina ao Londona, Jason Florio, nanoratra  momba ireny fakàna an-kery ireny ho an'ilay hetsika santatra nataony #Portraits4PositiveChange tamin'ny Janoary 2019:
Tao an-tranon-dreniny izay maty vao haingana i Dodou Sanyang. Iray tamin'ireo be antitra nalaina an-kery noho ny didy navoakan'ny fitondràna Yahya Jammeh  tamin'ny 2009. Nandeha nitety vohitra ireo vondrona ivelan'ny tafika an'i Jammeh, miaraka amin'ilay borigadin'ny tanorany, The Green Boys,  ary ireo ‘mpanao mazia’ avy any Ginea, tafiditra tao anatin'ilay fihazàna mpamosavy  nanerana ny firenena .
Notànana hatramin'ny dimy andro tany aminà toerana miafina ireo notondroina ho mpamosavy ary nasaina nisotro ‘Kubehjaro’, taharon-javatra mahafanimpanina sy mampahita zavatra, ary avy eo terena hiaiky fa manao asam-pamosavy. Ny sasany koa aza tena voadaroka mafy mihitsy ary norobain'ireo nisambotra azy. Ny sasany maty tany amin'ny toerana nitazonana azy, ary ny hafa, toa ny renin'i Sanyang, niaritra hirifiry nandritra ny taona marobe noho ny aretina, alohan'ny hahafatesany. Marobe ireo ao amin'ny vohitr'i Sanyang no mino fa tsy ho lasibatry ny fihazàna mpamosavy ireo efa antitra be, fa noho ilay vohitra fanjakan'ny mpanohitra – Essau, Northbank Division, The Gambia .
Ny Polsiy dia anisan'ireo andrimpanjakana marobe sy olontsotra niharan'ny fihazàna mpamosavy nasain'ny fitondrana Jammeh natao tamin'ny 2009. Biraon'ny polisy ao Serekunda , Gambia, 2015. Sary an'ny WildRedHen tao amin'ny Flickr, CC BY 2.0.
LGBTQ: Endrika hafan'ny ‘fanaovana hazalambo’
Niato tampoka tamin'ny 2009 ilay hazalambo nataon'i Jammeh rehefa niato tampoka tsy nasiana fanazavàna ny governemanta notarihany ary navotsotra ireo rehetra nosamborina, tsy nolazaina izay antony, araka  ny fampitambaovao iray avy amin'ny Amnesty International, tamin'ny Aprily 2009.
Fa taona maro taty aoriana, ireo vondrompiarahamonin'ny pelaka, vavy tia vavy, lahy tia lahy, manana taova roa, ireo nanova taovampananahana koa, dia lasibatry ny fitondran'i Jammeh. Naborak ‘i Graeme Reid, talen'ny fandaharanasa momba ny zon'ireo LGBTQ ao amin'ny Human Rights Watch, tamin'ny Desambra 2014 fa:
Ny vondrompiarahamoni'nireo LGBT no lasibatra farany ho an'i Jammeh. Tamin'ny Oktobra, nosoniaviny ny lalàna vaovao momba ny heloka bevava izay ahitàna fanasaziana tonga hatramin'ny famonjàna mandra-maty ho an'ny “mpitia olona mitovy taovampananahana aminy”, izay nofaritana ho toy ny fomba iray hampidirana ihany koa ireo ‘mpanao heloka miverimberina’ sy ireo olona mitondra otrikaretina VIH tondroina fa pelaka (lahy sy vavy). Ilay lalàna vaovao dia niteraka hazalambo  natao an'ireo olona LGBT ao Gambia, izay raha kely indrindra 14 no fisamborana voarakitra. Nampijaliana ny sasany tamin'ireny olona ireny. Nambaran'ireo notazonina fa nilazana ry zareo hoe raha tsy ‘mibaboka’, ary koa manome ny anaran'ireo hafa lazaina fa tsy manara-dalàna, hotsofohana zavatra any anaty lavabodin-dry zareo na ny fivaviany mba hanandramana ny fironana ara-pananahana ananany. Ireo izay (afaka) nandositra dia nitady fialofana tao Senegaly teo akaiky teo.
Hatao any amin'ireo vohitra nitrangan'ny hazalambo ireo fivoriana manokan'ny TRCC, any ivelan'i Banjul renivohitr'i Gambia, ka atomboka ao amin'ny vohitr'i Jambur any atsimo-andrefan'i Banjul. Enga anie, hojeren'ny TRRC ireo endrika rehetran'ny sotasota na fampihorohoroana teo ambany fitondran'i Jammeh.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/12/03/145272/
 Nametraka ny fitànana an-tsoratra: http://www.kerr-fatou.com/2009-police-officer-demoted-to-the-lowest-rank-for-refusing-jammehs-witch-doctors-cure/
 Mustapha Ceesay: http://thepoint.gm/africa/gambia/article/jammeh-alleged-witch-hunt-victim-discloses-about-40-other-victims
 fampitam-baovao iray: https://www.amnesty.org.uk/press-releases/gambia-hundreds-accused-witchcraft-and-poisoned-government-campaign
 Yahya Jammeh: https://blog.jasonflorio.com/?s=jammeh
 The Green Boys,: https://en.wikipedia.org/wiki/Yahya_Jammeh
 fihazàna mpamosavy: https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-11200546
 The Gambia: https://blog.jasonflorio.com/?s=gambia